Deepin OS 15.6 Fametrahana torolàlana | Avy amin'ny Linux
Deepin OS antoka dia iray amin'ireo fizarana Linux izay Izy io dia iray amin'ireo tontolo desktop tsara tarehy indrindra izay hitantsika amin'ny Linux. Ho an'ireo olona mbola tsy mahalala ity fizarana ity dia azoko lazaina izao manaraka izao.
Deepin dia fizarana Linux novolavolain'ny orinasa sinoa Wuhan Deepin Technology, fizarana ity loharanom-baovao misokatra ary mifototra amin'ny Debian, que mampiasa ny tontolon'ny birao misy azy izy io izay toa tsara sy voalamina.
Ity fizarana ity Izy io dia mety ho iray amin'ireo rafitra GNU / Linux be soso-kevitra indrindra ho an'ireo izay mifindra monina avy amin'ny Windows mankany amin'ny tontolon'ny Linux ampiasaina.
Y indrindra ho an'ireo olona izay tsy manana ny hevitra fototra momba ny Linux. Miorina amin'ny io fanolorana io Deepin dia manana ny iray amin'ireo dingana fametrahana tsotra sy mora indrindra.
Noho izany, tsy mitaky mihoatra ny fananana ilay hevitra fototra momba ny kapilao sy ny fizarazaran'izy io.
Na eo aza izany dia misy ny vaovaom-baovao izay tsy mahatakatra an'io ary azo takarina izany satria isika rehetra dia mandalo io teboka io amin'ny voalohany.
Izany no antony andao zaraina amin'ireo vaovao ireo torolàlana fametrahana tsotra ity.
Alohan'ny hanombohana ny fizotry ny fametrahana dia ilaina tokoa ny fahafantarantsika ireo fepetra ilaintsika hahafahana mametraka an'i Deepin amin'ny solosaintsika.
Fepetra takiana amin'ny rafitra hametrahana OS Deepin:
Processor an'ny Intel Pentium IV 2GHz na avo kokoa.
RAM 1GB na mihoatra ho an'ny fampisehoana tsaratsara kokoa.
20GB habaka kapila maimaim-poana na mihoatra.
Mpamaky DVD raha sendra mametraka izany.
Port USB raha toa ka apetraka amin'ity fomba ity.
1 Deepin OS 15.6 misintona
1.1 Haino aman-jery fametrahana DVD
2 Fametrahana ny Deepin OS 15.6
Deepin OS 15.6 misintona
Noho ny fahafantarana ny fepetra takiana sy ny fahazoana antoka fa ananantsika izy ireo, dia afaka mandeha misintona ny ISO an'ny rafitra izay azonao sintonina avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny fizarana, ny rohy dia ity.
Haino aman-jery fametrahana DVD
Windows: Azontsika atao ny mandoro ny ISO amin'ny Imgburn, UltraISO, Nero na programa hafa na dia tsy misy azy ireo aza ao amin'ny Windows 7 ary avy eo manome antsika safidy io dia tsindrio havanana amin'ny ISO.
Windows: Azonao atao ny mampiasa Universal USB Installer, LinuxLive USB Creator, Etcher na iray aza amin'ireny dia mora ampiasaina.
Linux: Ny safidy atoro anao dia ny fampiasana ny baiko dd:
Na dia azonao atao aza ny misintona an'i Etcher ary manamora ny asa miaraka amin'ity programa ity.
Fametrahana ny Deepin OS 15.6
Raha vantany vao noforonina ny fitaovana fampidiran-tsika, dia tsy maintsy ataontsika izay ananantsika safidy hisintona amin'ny DVD na USB ao amin'ny BIOS an'ny rafitray.
Tsy mikasika an'ity lohahevitra ity aho noho ny fahasamihafana lehibe misy, azonao atao ny manontany amin'ny tamba-jotra na amin'ny boky torolàlana momba ny motherboard / fitaovana ampiasainao ity safidy ity, izay ho hitanao amin'ny "Boot" na "boot setting" kiheba
Rehefa manomboka ny solosaina fotsiny tsy maintsy misafidy ny safidy voalohany isika dia ny "Install Deepin", izay hanombohany hameno ny zavatra ilaina rehetra hanombohana ny fametrahana amin'ny solosainantsika.
Vita ity hametraka antsika amin'ny safidy hisafidy ny fiteny fametrahana izao ary miaraka amin'izay no hamboarina ny rafitra. Rehefa mifantina ilay fiteny dia tsindrio manaraka.
En ity menio manaraka ity dia hangataka aminay ny angon-drakitra hamoronana ny mpampiasa anay hiara-hiasa amin'ny rafitra izahay, zava-dehibe ny hahatsiarovanao ny teny miafinao satria tsy hoe zava-dehibe fotsiny ny miditra amin'ilay rafitra, fa io koa no mila miasa ao amin'ny terminal.
Ny dingana manaraka dia hangataka antsika hisafidy ny faritra misy antsika, mifantina ny anay izahay ary tsindrio manaraka.
Amin'ity dingana ity dia tsy maintsy misafidy ny toerana fametrahana isika, na eto amin'ny kapila mafy na amin'ny fizara manokana.
Ny safidy voalohany dia ny fanaovana fametrahana tsotra izay ny partition na disk fotsiny no fidiantsika izay tiantsika hapetraka ny rafitra.
Si mila fametrahana mandroso kokoa izahay na ny fisarahana izay tiantsika hapetraka dia tsy miseho, Eto isika dia afaka manamboatra azy io.
Eto isika dia haseho ny fizarazarana rehetra misy eto izay azontsika atao ny mifidy izay hametrahana azy ary hametraka azy io.
Tsindrio ny tohiny ary izao dia mila miandry fotsiny ny famaranana vao manomboka mankafy ity fizarana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Deepin OS 15.6 torolàlana fametrahana
Feliksa manuel dia hoy izy:
Trano famakiam-boky inona no ifotoran'ny tontolo iainanao?
Valiny tamin'i Felix Manuel
Ao amin'ny DTK (Deepin Tool Kit), amin'ny ankapobeny C ++ sy Qt
Juan J. Garrido dia hoy izy:
Toa lahatsoratra mahantra amiko izany. Manantena aho ny hahita sary an-tsary ny fizarana mihoatra ny "manana ny iray amin'ireo tontolon'ny birao tsara tarehy indrindra hitantsika amin'ny Linux" Na izany aza, pikantsary vitsivitsy fotsiny amin'ny fametrahana. Antenaiko ihany koa ny hanomezanao hevitra momba ny rindrambaiko ananan'izy io ho toy ny fototra sy ireo fahalianana izay i Deepin irery no mitondra.
Misaotra tamin'ny asanao
Valiny tamin'i Juan J. Garrido